ဘဝမှတ်တိုင်: ဖျော်ဖြေမှု ရသပေါင်းစုံ ခံစားနိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့ မြန်မာ app တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ရယူကြပါစို့!
ဖျော်ဖြေမှု ရသပေါင်းစုံ ခံစားနိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့ မြန်မာ app တွေကို တစ်နေရာထဲမှာ ရယူကြပါစို့!
Mystore ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး app တွေကို တစ်နေရာထဲမှာစုံလင်စွာရရှိနိုင်တဲ့ နေရာလေးပါ။ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရှာဖွေချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂိမ်းကစားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Mystore ကိုရောက်ရှိတာနဲ့ သင်လိုချင်တာအကုန်လုံးကို တစ်နေရာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာဘာသာနှင့် App များကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ရရှိနိုင်ခြင်း
သင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ချင်တဲ့ app တွေကိုရွေးပြီး ဒီအတိုင်းထားလိုက်ပါက အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပေးမည့် ပုံစံသစ်
သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ app တွေကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဖော်ပြချက်အပြည့်အစုံနဲ့အတူ ပုံတွေက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်
app အသစ်တွေကို အမြဲတမ်း ထည့်သွင့်ပေးသွားမယ့် ၀န်ဆောင်မှု
နိုင်ငံတကာမှ အသစ် app များကို မြန်မာလိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် စတိုးထဲသို့ထည့်သွင်းထားသည်။
Credit : http://mysquar.com
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/11/2014 05:26:00 pm